Responsive Web Design ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ RWD
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 28, 2020 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021 Douglas Karr
ဆယ်နှစ်ကြာပြီ တုံ့ပြန်မှုကို web ဒီဇိုင်း (RWD) သည်ကတည်းကခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသွားရန် ကင်မရွန်အဒမ်ကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည် သဘောတရား။ ၎င်းအကြံဥာဏ်သည်ကျွမ်းကျင်ပြီး၊ ကြည့်ရှုနေသောစက်၏ viewport နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော site များကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်မဒီဇိုင်းနိုင်သနည်း။
Responsive Design ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Responsive Web Design (RWD) ဆိုသည်မှာ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းများကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း မော်နီတာများ။ အချိုးအစားအခြေခံသည့် Grid များ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရုပ်ပုံများနှင့် CSS3 မီဒီယာမေးမြန်းချက်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် RWD ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော site တစ်ခုသည် @media rule ၏ extension တစ်ခုဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ပုံရိပ်ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များကို၎င်းအစိတ်အပိုင်းများ၏အပြင်အဆင်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ တုန့်ပြန်မှုပုံစံသည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအဘယ်ကြောင့်အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်းရှင်းပြသည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီက redeveloped DK New Media တုန့်ပြန်မှုရှိရန်နှင့်ယခုတွင်လုပ်ဆောင်နေသည် Martech Zone အတူတူလုပ်ဖို့!
ဆိုက်တုန့်ပြန်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏နည်းစနစ်သည်သင်ကြည့်ရှုရန်၏အရွယ်အစားကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့်သင်၏စတိုင်များကိုအဆင့်ဆင့်ချထားရန်လိုအပ်သောကြောင့်အနည်းငယ်ပင်ပန်းသည်။
Browser (ဘရောက်ဆာ) တွေကသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့က styleheet ကိုထိပ်ကနေအောက်ကိုတက်ပြီးမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့စတိုင်တွေကိုမေးမြန်းတယ်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားမြင်ကွင်းတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်လ်ဒီဇိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လိုအပ်သည့် element များကိုပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
မိုဘိုင်း - ပထမဆုံးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ site သည် mobile-friendly ဖြစ်ရုံသာမကဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပါတ်သက်၍ စဉ်းစားနေသည်။
Lucinda Duncalfe, Monetate စီအီးအို
Device မျိုးစုံအတွက်တုန့်ပြန်မှုရှိသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်အလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသရုပ်ဖော်သည့် Monetate မှအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တုန့်ပြန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုပါကသင်၏အမှတ်အသားကိုပြပါ Google က Chrome ကို Browser (Firefox တွင်တူညီသောအင်္ဂါရပ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်) အတွက်ဖြစ်သည် DK New Media။ ယခုရွေးပါ View> Developer> Developer Tools ကိုကြည့်ပါ မီနူးကနေ။ ၎င်းသည် browser ၏အောက်ခြေတွင် tool များစွာကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။ Developer Tools menu bar ၏လက်ဝဲဘက်ရှိမိုဘိုင်းအိုင်ကွန်ငယ်လေးကိုနှိပ်ပါ။
မြင်ကွင်းကိုရှုခင်းမှပုံတူသို့ပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်မည်သည့်ပမာဏ၏အရွယ်အစားကိုမဆိုရွေးချယ်ရန်ထိပ်ဆုံးရှိအညွှန်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်စာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏တုန့်ပြန်မှုဆိုင်ရာချိန်ညှိချက်များကိုအတည်ပြုရန်နှင့်သင်၏ site သည်ကိရိယာများအားလုံးတွင်ကြည့်ကောင်းနေစေရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအေးဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်!
Tags: ကင်မရွန်အဒမ်ရှင်းပြဗီဒီယိုမိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုက်ဘ်ဆိုက်တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းတုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းကို infographicတုံ့ပြန်မှု infographicတုန့်ပြန်မိုဘိုင်းဒီဇိုင်းတုံ့ပြန်မှုကို web ဒီဇိုင်းရသတုန့်ပြန်ဒီဇိုင်းကဘာလဲတုံ့ပြန်မှုကို web ဒီဇိုင်းကဘာလဲrwd ကဘာလဲ
မေလ 31, 2015 မှာ 1: 13 pm တွင်
၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းသည် ၀ က်ဘ်စီမံခန့်ခွဲသူများကိုမရွေးချယ်တော့ပါ၊ ယခုသူတို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဒီအချက်အလက်တွေကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2:2021 pm မှာဇွန် 6, 04
ဒီကောင်းစွာရှင်းပြသည်ဆောင်းပါးအတွက်ဒေါက်ဂလပ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအမှုအရာများ၏အကြောင်းအရာဘက်မှာသော်လည်းဤသဘောတူရပေမည်။ ဆိုက်အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်သော layout မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တုန့်ပြန်သောအကြောင်းအရာလိုအပ်သည်။ သို့သော်အခြေခံကျကျ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်မူသင်၏ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆောင်းပါးကို၎င်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသေချာစွာအသုံးပြုမည်။
ဇွန် 2, 2021 မှာ 12: 42 pm တွင်
မင်းအာရုန်နေတယ်ထင်တယ် အရာဝတ္ထုများကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲရန်နှင့်ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက်မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။